Ukuphupha ngeSchwarz Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Umbala omnyama uhlala unxulunyaniswa namagama usizi kunye nokuzila. Kodwa ubuhle kunye nokucokiswa kungabonakaliswa ngombala omnyama. Cinga nje ngegama elimiselweyo "ilokhwe encinci emnyama" yelokhwe emnyama emnyama. Isalathiso sendawo yokuyila nayo inokwenzeka. Kuba uninzi lwabazobi okanye abantu abayilayo bayathanda ukunxiba iimpahla ezimnyama. Ngenxa yoko, abalindelanga ukuphazamiseka kwizinto abazenzileyo, ezinokubakho ngeminye imibala kwimpahla.
Ukongeza, sihlangana nombala omnyama phantse yonke imihla kwindalo: ukusuka kunomyayi omnyama ukuya kumnyama, enye yezona ntlobo zidumileyo zethrush. Izinja ezimnyama, iikati, kwaye ngamanye amaxesha namahashe. Amatye amnyama, njengeoniks. Sinokufumana umbala omnyama kwiinoveli ezinje ngeHarry Potter. Okanye iibhiliyadi ezimile ibhola emnyama.
Kodwa unokuchazwa njani umfuziselo wephupha "elimnyama" ngokubanzi? Ngaba lo mbala uthetha ntoni ephupheni?
1 Isimboli yephupha «emnyama» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Isimboli yephupha «emnyama» - ukutolikwa kwengqondo
3 Umqondiso wephupha «omnyama» - ukutolikwa kokomoya
Isimboli yephupha «emnyama» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokubanzi, umbala omnyama ephupheni luphawu olunentsingiselo ezahlukeneyo. Inokuchazwa ngokufanelekileyo nangokubi. Oku ikakhulu kuxhomekeke kwiimeko ezihamba nawe ephupheni.
Kubonwe ngokuqinisekileyo, uphawu "lwamnyama" luphupha luphawu lwe Hlamba kunye namandla okudala. Kodwa inokusetyenziselwa Ubumnyama kunye nobumnyama, nto leyo engumqondiso olungileyo apha. Kuba ebumnyameni unokwenza okanye ukuvela kwezinto ezintsha. Oku ke kungena ekukhanyeni kwaye ke oko kutsala umdla onqwenelekayo.
Nangona kunjalo, ukuba umnyama ephupheni utolikwe ngokungalunganga, uphawu lwephupha apha lubhekisa ezantsi okanye ezoyikisayo Iimpawu zomntu. Ukuphupha kufanele ukufihle oku kwindawo okuyo. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uqhubeke ukujongana nabo ngaphakathi. Kungenxa yokuba kuphela xa unokwamkela ezi mpawu zeempawu apho uya kuthi ube nakho ukuzibandakanya ngokuqinisekileyo kubomi bakho.
Ngamanye amaxesha isimboli yephupha "emnyama" ikwanesicelo, ngokotoliko jikelele lwephupha, Utshintsho yenza ebomini bakho. Kwakhona, ukuphupha kungabonakaliswa ngephupha lakho lokoyika okungaziwayo. Kungenxa yoko le nto ungafuni ukuzama nantoni na entsha ebomini bakho kwaye ukhetha ukunamathela kwindlela yokuziphatha yakudala. Ukuba ukuphupha ubona yonke into emnyama kwaye ilusizi ephupheni lakho, oku kunokuqondwa njengophawu lokugula.
Umbono wesimboli seYin-Yang ngombala omnyama nomhlophe ephupheni ufuna ukubonisa umphuphi ukuba izinto ezichaseneyo zinokudityaniswa zizonke ebomini. Ngokunxulumene nesimboli yephupha "isibetho", umnyama ephupheni unokuhlala ebonisa izilahleko zeshishini. Iinkozo ezimnyama zesardard zinokukuxwayisa ngezicwangciso ezithandabuzekayo ngelixa ulele.
Isimboli yephupha «emnyama» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwenkcazo yengqondo yephupha, umnyama njengophawu lwephupha alibonisi umbala, kodwa endaweni yoko ukungabikho kokukhanya. Oku kubhekisa kwimeko ka 'Ungazi«.
Umphuphi akaziboni izakhono zakhe kunye neepropathi el mundo yomlindo. Ke ngoko, kuya kufuneka ujongane nesiqu sakho kwaye uqaphele iimpawu zakho zomntu ngokuzihlalutya ngokwakho. Unokufuna noncedo lobuchwephesha koku. Umahluko oqinileyo omnyama nomhlophe ephupheni ngokwasemphefumlweni ubiza umphuphi ukuba adibanise izichasi zakhe zangaphakathi.
Ukuba umfanekiso wephupha "elimnyama" ubonwa ngokunxulumene nomgubo wekofu, umhlaba osemtsha kwindawo yokugaya ikofu, umphuphi uhlala efumana uphawu lobuntu bakhe bobufazi.
Umqondiso wephupha «omnyama» - ukutolikwa kokomoya
Ukusuka kwimbono yokomoya, uphawu "olumnyama" lwamaphupha luquka ukungabikho kwezinto ezivela kuzo zonke izinto kwaye ezivumela ukufikelela kuzo zonke iindawo zokudalwa. Kwakhona, umnyama umele isipho ephupheni. amandla obufazi.